I-Translia, inkonzo eguqulwayo yobuchwephesha-Geofumadas
I-Translia, inkonzo yokuguqulela ingcali
Ukuguqulelwa komxholo kolunye ulwimi kuyinto eqhelekileyo kakhulu. Ukugqithisa umxholo wokusetyenziswa kwesiNgesi, isiPhuthukezi okanye isiFrentshi, ngokuqinisekileyo iGoogle iyisombulula ingxaki. Kodwa ukuba ibingumbhalo wentengiso, njengakwimeko yeethenda, ekubhekiswa kuyo ukuba zichazwe kulwimi oluthile nalapho i-hermeneutics engalunganga ikhokelela kwiingxaki zomthetho, Traducción Ingcali
Isidingo siba ngxamisekileyo ukuba akukho xesha lincinci likho okanye ukuba akukho nkonzo yokuguqulela kwiilwimi ezingaqhelekanga kumxholo, ukunika umzekelo: isiJapan, isiArabhu, isiJamani.
Kule nto, kukho i-Translia, isisombululo esikwi-intanethi kungekuphela nje kwabo bafuna inkonzo yokuguqulela, kodwa nakwabo bafunda ngaphezu kolwimi olunye, kwaye banethuba lokusebenza kwi-Intanethi. Makhe sibone ukuba:
Kuyenzeka ukuba ubhalise njengomguquleli, ubonise iilwimi zesizinda, kwaye usebenze ekhaya. Unokukhetha elona xabiso liphantsi ngegama ngalinye, ngokubona ukubonelela ngokuhambelana nezinto ezikhethwayo, ekupheleni kwenyanga imali ifike nge-Paypal okanye ngebhanki.
I-Tanslia kwabo bafuna inguqulelo
Kuya kufuneka ubhalise, uthumele uxwebhu ofuna ukuluguqula kwaye ukhethe iimpawu ezinje:
Ixesha onalo, ukusuka kwiiyure ukuya kwiiveki. Oku kukwenza ngokubaluleka ngokubhekisele kubukho babaguquleli abasisigxina.
Uhlobo loguqulelo, olunokuba lolungcali ngokupheleleyo, njengoxwebhu olusemthethweni olungele ukupapashwa, luza kusetyenziswa ngokukhawuleza umntu kunye nolula kakhulu ukuqonda umxholo.
Inkqubo inokuhlanganisa ngaphezulu komguquleli omnye, ukuze uhambe ngexesha elilindelekileyo kunye nomgangatho. Ngokubanzi umxholo wahlulahlulwe waba yimihlathi emincinci ukuze abaninzi basebenzisane.
Ukudibana kusekwe kwinqanaba elifezekisiweyo, zombini ukuguqula, ukuhlaziya okanye ukulunga.
Umthengi akahlawuleli ade aneliseke ngokupheleleyo, angakwenza oko nge-Paypal okanye ikhadi letyala.
Ngamafutshane, inkonzo enkulu.
Ukongeza, kukho inkonzo ehambelana nayo, ekuhlawula ikhomishini yomntu ngamnye, kwikhonkco elinje, ucele ukuguqulelwa okanye unike iinkonzo nge-Translia.
Ke ukuba ufuna uguqulelo, okanye usebenze ekhaya njengotoliko, uguqulelo yindawo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Enye enye ngexesha elifanayo ...
Post Next I-2 Geofumadas kwi-fly and 6 linksOkulandelayo "
I-2 iphendula kwi- "Translia, inkonzo yokuguqulela"
uhlolo olwenziweyo uthi:
molo indlela owenza ngayo iyinyani kukuba bendingajonganga kwanto ngesi sihloko kwaye inyani kukuba esi sihloko sandihlutha kakhulu: P, kodwa ndiyanibulela ngoba indlela enibhale ngayo yandithanda. Okokuqala ngqa ndafumana umxholo ofanelekileyo kwiwebhu. Ngokuzithoba